Armand Duplantis nandray izao tontolo izao firaketana an-tsoratra ao amin'ny pole andohalambony eny amin'ny 6 metatra sy 17 santimetatra | Apg29
Armand Duplantis nandray izao tontolo izao firaketana an-tsoratra ao amin'ny pole andohalambony eny amin'ny 6 metatra sy 17 santimetatra
Fa ny fanantenana izay mino an'i Jesosy dia be lavitra kokoa!
Dia tena mafy sy mahatalanjona. Fa izaho tsy afaka ny tsy milaza fa ny fanantenantsika izay mino an'i Jesosy dia lehibe sy tsara kokoa be. Duplantis dia niankohoka teo amin'ny fandriana indray, fa ny fanantenanay mitandrina ny lalana rehetra ho mandrakizay!
6 metatra sy 17 santimetatra
Armand Duplantis nifaninana ho Soeda efa rava izao tontolo izao firaketana an-tsoratra ao amin'ny pole andohalambony eny amin'ny an-trano ny hariva Gala tany Polonina.
Armand Duplantis, antsoina hoe "Mondo" dia Amerikana Open book pole vaulter. Manana lafiny roa zom-pirenena, fa mifaninana ho Soeda.
Dia nandeha ny haavon'ny 6 metatra sy 17 santimetatra teo ny fanandramana faharoa.
Dia tena mafy sy mahatalanjona.
fanantenana ny famonjena
Fa izaho tsy afaka ny tsy milaza fa ny fanantenantsika izay mino an'i Jesosy dia lehibe sy tsara kokoa be. Duplantis dia niankohoka teo amin'ny fandriana indray, fa ny fanantenanay mitandrina ny lalana rehetra ho mandrakizay!
Romana 8: 24a. Fa ny fanantenana no hamonjena antsika.
Dia nandriatra ny zioga tamin'ny andrana voalohany, fa ny faharoa nataony! 6 metatra sy 17 santimetatra! Hanketo mivantana taorian'ny nandeha avy ny mpanatrika sy ny segerjublade.
Mainka isika no tsy tokony segerjubla ny fanantenana fa i Jesoa Kristy dia nandresy ho antsika?